Umenzi womgaqo-nkqubo wabucala | Umgangatho ophezulu kunye netekhnoloji ephezulu-Ngamandla onke
Umhla wokuqalisa: Agasti 1, 2017
Esi saziso sabucala sichaza iindlela zabucala ze-EVER-POWER GROUP CO., LTD. kunye newebhusayithi yethu: https://www.ever-power.net. Esi saziso sabucala sisebenza kuphela kulwazi oluqokelelwe yile webhusayithi, ngaphandle kwalapho kuchazwe ngenye indlela. Iya kukwazisa ngoku kulandelayo:
Loluphi ulwazi esiluqokelelayo;
Indlela enokulungiswa ngayo;
Luya kwaziswa njani utshintsho kumgaqo-nkqubo;
Ujongana njani neenkxalabo malunga nokusetyenziswa gwenxa kwedatha yobuqu.
Ulwazi Collection, Sebenzisa, ekwabelaneni
Singabanini bodwa bolwazi oluqokelelwe kule ndawo. Sikwazi kuphela ukufikelela / ukuqokelela ulwazi osinika lona ngokuzithandela nge-imeyile okanye omnye umntu onxibelelana ngqo nawe. Asiyi kuthengisa okanye ukurenta olu lwazi nakubani na.
Siza kusebenzisa ulwazi lwakho ukuphendula kuwe, malunga nesizathu sokunxibelelana nathi. Asiyi kwabelana ngolwazi lwakho naye nawuphi na umntu wesithathu ngaphandle kombutho wethu, ngaphandle kokuba kufanelekile ukufezekisa isicelo sakho, umzekelo, ukuthumela iodolo.
Ngaphandle kokuba ucele ukuba ukuba, ukuze siqhagamshelane nawe email kwixesha elizayo ukunixelela specials, iimveliso okanye iinkonzo ezintsha, okanye utshintsho kule nkqubo wabucala.
Ukufikelela kwakho kunye nokuLawula ngolwazi
Unokukhetha ukuphuma kubo bonke abafowunelwa kuthi nangaliphi na ixesha. Unokwenza oku kulandelayo nangaliphi na ixesha ngokunxibelelana nathi ngedilesi ye-imeyile okanye inombolo yefowuni ebonelelwe kwiwebhusayithi yethu:
Jonga ukuba yeyiphi idatha esinayo ngawe, ukuba ikhona.
Sitshintsha / lungisa yonke idatha esinazo malunga nawe.
Sitshintshe nayiphi na idatha esinazo malunga nawe.
Veza nayiphi na inkxalabo onayo malunga nokusebenzisa idatha yakho
Ukuze usebenzise le webhusayithi, umsebenzisi kufuneka azalise ifom yobhaliso kuqala. Ngexesha lokubhalisa umsebenzisi uyacelwa ukuba anike ulwazi oluthile (njengegama kunye nedilesi ye-imeyile). Olu lwazi lusetyenziselwa ukunxibelelana nawe malunga neemveliso / iinkonzo ezikwindawo yethu apho uvakalise umdla khona. Ngokhetho lwakho, unokubonelela ngolwazi lwe-demographic (efana nesini okanye ubudala) malunga nawe, kodwa ayimfuneko.
Sicela ulwazi kuwe kwifom yethu yoku-odola. Ukuthenga kuthi, kufuneka unikezele ngolwazi lokunxibelelana (njengegama kunye nedilesi yokuthumela) kunye nolwazi lwezezimali (njengenombolo yekhadi letyala, umhla wokuphelelwa). Olu lwazi lusetyenziselwa iinjongo zokuhlawula kunye nokuzalisa iiodolo zakho. Ukuba sinengxaki yokulungisa iodolo, siya kusebenzisa olu lwazi ukunxibelelana nawe.
Sabelana ngolwazi oluhlanganisiweyo lwabantu kunye namaqabane ethu kunye nabathengisi. Oku akunxibelelekanga kulo naluphi na ulwazi lobuqu olunokuchonga nawuphi na umntu.
Kwaye / okanye:
Sisebenzisa inkampani yokuthumela yangaphandle ukuthumela iiodolo, kunye nenkampani elungisa amakhadi okuthenga ngetyala ukubhatala abasebenzisi beempahla kunye neenkonzo. Ezi nkampani azigcini, zabelana, azigcini okanye zisebenzisa ulwazi oluchaziweyo ngazo naziphi na iinjongo zesibini ngaphaya kokugcwalisa iodolo yakho.
Sisebenzisana nelinye iqela ukubonelela ngeenkonzo ezithile. Xa umsebenzisi ebhalisela ezi nkonzo, siya kwabelana ngamagama, okanye kolunye ulwazi lokunxibelelana olufunekayo kumntu wesithathu ukubonelela ngezi nkonzo. La maqela akavunyelwanga ukusebenzisa ulwazi oluchaziweyo ngaphandle kwenjongo yokubonelela ngezi nkonzo.
Sithatha amanyathelo okhuseleko ukukhusela ulwazi lwakho. Xa ungenisa ulwazi olubuthathaka ngewebhusayithi, ulwazi lwakho lukhuselekile zombini kwi-intanethi nangaphandle kuyo.
Naphi na apho siqokelela khona ulwazi olubuthathaka (olufana nedatha yekhadi letyala), olo lwazi lufihliwe kwaye ludluliselwe kuthi ngendlela ekhuselekileyo. Ungakuqinisekisa oku ngokukhangela i icon evaliweyo evaliweyo ezantsi kwisikhangeli sakho sewebhu, okanye ujonge u "https" ekuqaleni kwedilesi yekhasi lewebhu.
Ngelixa sisebenzisa ukubethela ukukhusela ulwazi olubuthathaka oludluliswe kwi-intanethi, sikhusela ulwazi lwakho ngaphandle kweintanethi. Kuphela ngabasebenzi abafuna ulwazi lokwenza umsebenzi othile (umz. Ukuhlawula okanye iinkonzo zabathengi) abanikwa ukufikelela kulwazi oluchongiweyo. Iikhompyuter / iiseva esigcina kuzo ulwazi oluchongiweyo zigcinwa zikhuselekile.
Sisebenzisa "cookies" kule ndawo. Icookie sisiqwenga sedatha esigcinwe kwi-hard drive yabatyeleli besiza ukusinceda siphucule ukufikelela kwakho kwindawo yethu kunye nokuchonga abaphindayo kwindawo yethu. Umzekelo, xa sisebenzisa ikuki ukukuchonga, awuzukungena kwigama lokugqitha ngaphezu kwesinye, ukuze ugcine ixesha ngelixa sikule ndawo yethu. Iicookies zinokusinceda ukuba silandele kwaye sijolise kwimidla yabasebenzisi bethu ukuphucula amava abo kwindawo yethu. Ukusetyenziswa kwecookie akunxibelelananga nangayiphi na indlela kulwazi oluchongiweyo kwindawo yethu.
Amanye amaqabane ethu eshishini anokusebenzisa ii-cookies kwindawo yethu (umzekelo, abathengisi). Nangona kunjalo, asinakho ukufikelela okanye ukulawula ezi cookies.
Le webhusayithi iqulethe amakhonkco kwezinye iisayithi. Nceda uqaphele ukuba asinalo uxanduva lomxholo okanye iinkqubo zabucala zezinye iisayithi. Sikhuthaza abasebenzisi bethu ukuba bazi xa beshiya indawo yethu kwaye bafunde iingxelo zabucala zayo nayiphi na enye indawo eqokelela ulwazi oluchongiweyo.
Uphando kunye nokhuphiswano
Amaxesha ngamaxesha indawo yethu icela ulwazi lusebenzisa uphando okanye ukhuphiswano. Ukuthatha inxaxheba kolu hlolo okanye ukhuphiswano lukhona ngokuzithandela ngokupheleleyo kwaye unokukhetha ukuba uthathe inxaxheba okanye ungayithabathi, kwaye ke ngoko, uxele olu lwazi. Ulwazi oluceliweyo lungaquka ulwazi loqhakamshelwano (njengegama kunye nedilesi yokuhambisa), kunye nolwazi lwendawo leyo (njengekhowudi ye-zip, inqanaba lobudala). Ulwazi loqhakamshelwano luya kusetyenziselwa ukwazisa abaphumeleleyo kunye namabhaso amabhaso. Ulwazi lophando luya kusetyenziselwa iinjongo zokubeka iliso okanye ukuphucula usetyenziso kunye nolwaneliseko lwendawo.
Nanini na xa utshintsho lwezinto lusenziwa kwisaziso sabucala chaza ukuba uza kubazisa njani abathengi.
Amanye amaLungiselelo njengoko kufunwa nguMthetho
Amalungiselelo amaninzi kunye / okanye iinkqubo ezinokufuneka ngenxa yemithetho, izivumelwano zamanye amazwe, okanye iinkqubo zeshishini. Kuxhomekeke kuwe ukuba zeziphi iinkqubo ezongezelelekileyo ekufuneka zilandelwe kunye / okanye zeziphi ezinye iindlela ezichaziweyo ezifunekayo. Nceda uqaphele ngokukhethekileyo i-California Online Privacy Protection Act (CalOPPA), ehlala ihlaziywa kwaye ngoku ibandakanya ukubhengeza okufunwayo "Musa ukuKhangela" imiqondiso.
Ukuba uziva ngathi asiwuthobeli lo mgaqo-nkqubo wabucala, kuya kufuneka unxibelelane nathi kwangoko nge-imeyile [email protected]